यी कलाकार जाे विवाहअघि नै गर्भवती भए ! - Everest Dainik - News from Nepal
यी कलाकार जाे विवाहअघि नै गर्भवती भए !
साउन १ । बलिउड र हलिउड दुबै इन्डष्ट्रीमा थुप्रै यस्ता सेलिब्रिटी छन् जो विवाहपूर्व गर्भवति भएका थिए । जसका कारण उनीहरुले हतारमा विवाह गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको थियो । बलिउडमा एक जनामा मात्रै श्रीदेवी त्यस्ती अभिनेत्री हुन जसले आफू विवाहअघि गर्भवति भएको बताएकी थिइन ।
श्रीदेवीका अनुसार बोनी कपूरसँग विवाह हुँदा उनको पेटमा सात महिनाको गर्भ थियो । श्रीदेवी र बोनी कपूरले सन १९९६ मा विवाह गरेका थिए । विवाह गरेको दुई महिनापछि श्रीदेवीले छोरी जन्माएकी थिइन ।
कोंकणा सेन शर्मा र रणवीर शौरी लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए र डेटिङ गरिरहेका थिए । तर सन २०१० मा अचानक एउटा सामान्य कार्यक्रम गरि विवाह गरे । र त्यसको छोटो समयपछि सन २०११ को शुरुमा उनीहरुको छोरो जन्मिएको थियो ।
पहिले नै विवाह गरेका कमल हासनले सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि अभ‍िनेत्री सारिकासँगै बस्न थाले । त्यसको केही समयपछि उनीहरुको बच्चा जन्मियो । उनीहरुले दोस्रो छोरी अक्षरा जन्मिएको धेरैपछि औपचारिक रुपमा विवाह गरे । तर उनीहरुको वैवाहिक जीवन लामो बनेन् ।
जेसिका अल्बाले हलिउड फिल्म निर्माता कैश वारेनसँग मे २००९ मा विवाह गरि र त्यसको एक महिनापछि जुनमा उनीहरुको बच्चा जन्मिएको थियो ।
सेलिना जेटलीले प्रेमी पीटर हगसँग गुपचुपमा विवाह गरिन । शुरुमा उनले गर्भवती भएको कुरा अस्वीकार गरेकी थिइन । जुलाई २०११ मा उनीहरुको विवाह भयो । तर मार्चमा उनले जुम्ल्याह बच्चालाई जन्म दिइन ।
ट्याग्स: Actoress, Preganent